Yini ehlukanisa abantu abaphumelelayo
Ufuna ukwazi ukuthi yini ehlanganisa bonke abantu abaphumelelayo? Umgidi wezigidi uRichard St John wathatha izingxoxo ezingama-500 nabantu abaphumelele kakhulu, kuhlanganise noBill Gates, u-Oprah Winfrey, uRichard Branson, uJoan Rowling bahlaziye amakhulu ezinkhulumiswano, biographies kanye nememori futhi babhala incwadi ethi "The Big Eight". Kulo mlando wakhuluma ngawo wonke umuntu ophumelelayo.
Ukuphumelela ukulandela ukufutheka
Bonke abantu abaphumelelayo balandela ukuthanda kwabo. Lapho uRussell Crowe ethi ngaso sonke isikhathi ukuthi kunesinye sezizathu ezenza athole i-Oscar ye-Best Actor: "Ngithanda ukudlala. Yilokho okugcwalisa kimi. Ngiyathanda ngothando. Ngithanda ukutshela izindaba. Lokhu kusho ukuphila kwami. "
Abantu abaphumelelayo basebenza kanzima
Khohlwa izindaba zeviki lomsebenzi wamahora angu-8 nezinye izinto ezingenasidingo, ezondliwa ngabashayeli bebhizinisi ezahlukene. Ukuzikhandla kungumlingani omkhulu. Futhi usebenza kanzima ukuze uphumelele. Isibonelo, umethuli odumile we-TV u-Oprah Winfrey uthi ufika esethi ngo-5: 30 ekuseni: "Ngisezinyaweni zami kusukela ekuseni. Usuku lonke angiboni ukukhanya okumhlophe, ngoba ngisuka enkundleni ngiya emgodini. Uma ufuna ukuphumelela, kufanele usebenze amahora angu-16 ngosuku. "
Ukuphumelela ungaxoshe imali
Abantu abadumile kakhulu abazange baxoshe imali, kodwa bamane benza okuthandayo kakhulu. Isibonelo, uBill Gates uthi: "Lapho sikhuphuka ne-Microsoft, asizange sicabange ukuthi singenza imali. Sithande inqubo yokudala isofthiwe. Akekho owayengacabanga ukuthi konke lokhu kuzoholela enkampanini enkulu. "
Abantu abaphumelelayo banganqoba
Ukuphatha "ubaba" uPeter Drucker uhlale ethi isihluthulelo sempumelelo "ukuphoqa ukuba wenze okuthile." "Yonke impumelelo yakho ayixhomeke kumathalenta, kepha kungakanani ekugcineni ukwazi ukuphuma endaweni yokududuza," kusho uPeter. Futhi uRichard Branson ubeka umqondo ofanayo nalokhu: "Ngihlale ngisebenza emkhawulweni wamathuba. Futhi kungisiza ukuba ngikhule ngokushesha. "
Abantu abaphumelelayo bayadala
Yaziwa kuwo wonke "imikhiqizo" ivela emibonweni. Uma ufuna ukuphumelela, udinga ukufunda ubuciko. U-Ted Turner wayengowokuqala ukuza nomqondo wokuthi ukusakazwa kwezindaba kungenziwa nge-clock. Wethula umzila we-CNN24, osakaza amahora angu-24 ngosuku lwama-7 ngesonto. Ngenxa yalokhu mbono, uTed waba ngumnikazi wezigidi eziningi kanye nabezindaba.
Abantu abaphumelelayo bangagxila
Abantu abaningi basho manje ukuthi kukhona isifo sokunakekelwa kokukhathazeka futhi kuthiwa lokhu kuvimbela abantu ekuthuthukiseni. Yiqiniso, i-ADD ikhona, kodwa kaningi ididekile ngokuntuleka kwesisusa kanye nesithakazelo. Uma umuntu ethola uthando lwakhe, khona-ke angagxila kulo. Umenzi wefilimu owaziwa kakhulu uNorman Jewison uthi: "Ngicabanga ukuthi konke okuphilayo ekuphileni kuncike ekutheni unamandla okugxila ezintweni ezilodwa futhi uzizinikele kuzo zonke." Thola ukuthanda kwakho. Gxila kuso. Futhi ujabule.
Ukuphumelela ukwazi ukubhekana nokungabaza
Yikuphi kithi ongahlukunyezwa ukungabaza ukuthi asikho kahle, siphumelele, abanamakhono. Kodwa uma ufuna ukuphumelela - ngokuqondile, kusetshenziswe, kufanele ubeke ukungabaza kwakho endaweni ethile kude. Ummeli uNicole Kidman uthi: "Ngihlale ngicabanga ukuthi ngidlala kabi kakhulu. Uma siqala ukudubula ifilimu, khona-ke ngezikhathi zamasonto amabili, ngiya kumqondisi ngoluhlu lwabadlali be-actress abangakwazi ukubamba iqhaza kangcono kunami. Kodwa-ke ngizolile. " Noma ungabaza, noma nguwe. Kulula.
Abasebenzi abaphumelelayo bayakwazi ukusebenza ngokuqinile
Abantu abathanda umsebenzi wabo, bangazi ukuthi banesikhathi esincane esisele kuso. Basamazama ukuthatha okungenani imizuzu embalwa ukwenza into oyintandokazi. Ngokwesibonelo, uJoan Rowling wabhala "uHarry Potter" lapho enendodakazi encane ezandleni zakhe: "Ngahamba naye phansi emgwaqweni, futhi lapho elele, wagijima waya e-cafe eseduze futhi wabhala ngokushesha ngangokunokwenzeka hhayi ukuvuka. "
Abantu abaphumelelayo abathandi uLwesihlanu
Wake wake wazibuza ukuthi kungani abantu abaningi abacebile bengasaphumuli umhlalaphansi? Yile indlela uWarren Buffett echaza ngayo: "Ngiyakuthanda ukusebenza. Uma kunguLwesihlanu, angizizwa nginjabulo njengabantu abaningi abasebenza. Ngiyazi ukuthi ngizosebenza ngempelasonto. "
Abantu abaphumelelayo bazama njalo ukuthuthukisa
Abantu abaphumelelayo bahlale becabanga ngendlela ongayithuthukisa ngayo wena nomkhiqizo wakho. Isibonelo, umsunguli omkhulu uthi: "Angikaze ngicabange into ngaphandle kokubuza ukuthi ngingayithuthukisa kanjani." Futhi wathi: "Ngiyajabula ngokuthi ebusheni bami angizange ngiqalile usuku lokusebenza lwamahora angu-8. Ukube impilo yami yayinemihla yokusebenza yaleso sikhathi, bengingeke ngikwazi ukuqedela izinto eziningi engangiziqalile. " Ngokusekelwe ezintweni ezenziwe encwadini ethi "The Big Eight"
Indlela yokwahlukanisa ukucindezeleka kusuka kwimizwelo embi
Ungamkhathazi umakoti enemibuzo
Ukuntula kwamandla wesifazane oqinile
Ingabe kufanele ubuyele emuva esoka?
Umndeni ngamunye ongajabuli awujabule ngendlela yawo
Kusho ukuthini ukuba umuntu onomusa?
Cindezela kusuka ku-feijoa: iresiphi ngesithombe
Izinto ezingu-10 okufanele zenziwe ngaphambi kokukhulelwa
Kanjani ukukhula izinwele ngokushesha?
Ukusebenza kwamafomu afushane
Shchi kusuka e-sorrel neqanda
Indlela yokulondoloza kahle inhlanzi e-aquarium
Ubuchopho bethole obubhaka ngemifino
Yini okufanele ibe ngowesifazane okahle?
Ukwakhiwa kokuzivikela emntwaneni. Ingxenye 2
I-Gardnerella kwabesifazane nabesilisa: izimbangela, izimpawu, ukwelashwa
Izindlela zesimanje kakhulu zokuvuselela
Lapho Ukuvikelwa KweMvali Oyingcwele Ngo-2016?
I-Horoscope ka-2010 yeSagittarius, eyazalwa ngonyaka we-Tiger